प्रदेश ७ का पहाडि जिल्लाहरुमा बिसु पर्वको रौनकता, सिस्नु खेलेर बिशुपर्ब मनाइँदै::Leading Digital News Portal Of State7| Political News, Science, Social, Sport, Economy, Business, Entertainment
प्रदेश ७ का पहाडि जिल्लाहरुमा बिसु पर्वको रौनकता, सिस्नु खेलेर बिशुपर्ब मनाइँदै
प्रकाशित मिति : शनिबार, बैशाख १, २०७५
लोकेन्द्र प्रशाद जोशी, बैसाख १, दार्चुला ।
दार्चुला लगायत शुदुरपहाडका स्थानियबासिन्दाहरुले नयाँ वर्षको पहिलो दिन धुमधामका साथ बिसु पर्व मनाइरहेका छन् । दार्चुला सहित प्रदेश नम्बर ७ का दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ्ग, अछाम, बाजुरा तथा डोटीका स्थानीयबासिन्दाहरुले नयाँ वर्षको पहिलो दिन बिहानैदेखि सिस्नु लगाउदै बिसु पर्व मनाइरहेका हुन ।
बिशेषगरी देवर भाउजु, नन्द भाउजू, साली भिनाजु र फुपु सालीहरुका बिचमा सिस्नो पानी छ्याप्दै बिसु पर्व दार्चुलाका गाउँगाउँमा मनाउदै छ । वैसाख १ गतेका दिन सबैले सिस्नु पानी लगाएमा वर्ष भरि कुनै रोग ब्याधि नलाग्ने विश्वास अनुसार एक आपसमा सिस्नु लगाउने चलन रहेको पाइन्छ ।
बिभिन्न समुदायमा लौरो नचाउने, बाघ भालु जस्ता जंगली जनावरहरुको जस्तै अभिनय गर्ने चलन पनि रहेको छ । यस्तो गर्दा जंगली जनावरहरुबाट हुने आक्रमणबाट बच्ने बिश्वास रहेको छ । एकअर्कोमा सिस्नु लगायो भने सबै बिषहरु नस्ट हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ । नयाँ बर्षमा कसैलाई रोग नलागोस सबै बिषहरु नष्ट होस भनेर बिसुलोणा चलाउने चलन रहेको जनविश्वास पाइन्छ ।
नयाँ वर्षलाई बिषु पर्वका रुपमा धुमधामसँग मनाउन सुदूरपश्चिमभर चहल पहल बढेको छ । घर लिपपोत, रंग रोेगन गरिएका छन । साथै कामको शिलशिलामा घर बाहिर रहेका आफन्तजन घर फर्किदा बिषु पर्वको रौनकता गाउँगाउँमा छाएको हो । बिषु पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न शक्ति पिठहरुमा पुजाआजा गरिन्छ । धार्मिक आस्थाले पनि यो समयमा घरबाहिर रहेका धेरै सुदूरपश्चिमेली घर फर्किएका छन् ।
दार्चुलाको मार्मा, नौगाड र अपी हिमाल गाउँपालीकाहरुमा बिषु पर्बका अवसरमा जात्रा समेत लाग्ने गरेको छ । मार्मा क्षेत्रको महान पर्वको रुपमा रहेको विशु जात्रा आजबाट सुरु भएको छ । हरेक नँया बर्षको सुरुसँगै मनाईने यो जात्रा मार्मा क्षत्रको साविकका खार, ईयरकोट, सिप्टी, लटिनाथ, गुल्जरल गायतका क्षेत्रमा धुमधामकासाँथ बिशुजात्रा मनाईने प्रचलन रही आएको छ ।
आज विहानैबाट सबैले नुहाइ मिठामिठा खानाका परीकारहरु पकाएर खाने तथा आफ्नो छरछिमेकमा बाँड्ने र नयाँ नयाँ लुगा लगाएर साँथि भाई जमघट हुनाले पुरै बर्षभरी नै सुभ वित्ने जन विश्वास रही आएको छ । जात्रामा दामाहा बजाउँने, डेउडा खेल्ने, इष्टकुल देबताका मन्दीरहरुमा पुजाआजा गर्ने, बिभिन्न अन्न चढाउँने र एक आपसमा खुसी साटासाटगरी बिशुजात्रा मनाइदैछ । बिगत बर्षहरुकोभन्दा भक्तजनहरु तथा ब्यपारीहरुको चहलपहल बढेको छ ।
यस्तै नयाँ बर्ष २०७५ समेत एक आपसमा शुभकामना सन्देशहरु साटासाट गरेर एब. बिभिन्न औपचारीक कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेर मनाइदै छ ।
चार सय चौँतिस मुक्त हलिया पुनःस्थापन
बर्षभरीको बजेट खर्च निरासाजनक, बर्खेभलमा बजेट बगाउँदै सरकारी कार्यालय
मालिकार्जुन धाममा पुजन जात्रा सम्पन्न
‘असल सवारी चालक सम्मानित’
बाढी र पहिराेमा मृत्यु हुनेकाे संख्या ६५ पुग्याे, ३७ घाइते
भारतको धम्कीले काम गरेन्, कोशी ब्यारेजका सबै ढोका खोलियो
दार्चुला समाचारदाता दार्चुला, साउन १ गते । गतबर्षसम्म आफ्नो नाममा घरजग्गा केहि नभएका...
दार्चुला। चालु आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ सकिन दुई दिन मात्रै बाकी रहदा सुदूरपश्चिम...
दार्चुला । देशकै सातौं धाम तथा दार्चुला जिल्लाको प्रमुख धार्मीक पर्यटकीय तिर्थस्थल...
दार्चुला । सार्वजनिक सवारी साधनमा ंसवारी आवागमन, ट्राफिक नियमको पालना गर्ने, यात्रु...
काठमाडौं। केही दिन देखिको अविरल वर्षाका कारण सोमबार विहान सम्म देशभर मृत्यु...
विराटनगर । सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव अत्यधिक भएपछि ब्यारेजका सबै ५६ वटै...
बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३२ पुग्यो, १२ जना घाइते
काठमाडौं । लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोका...
लोकेन्द्र प्रसाद जोशी
अर्जुन सिहं माल
दार्चुला जिल्लास्थित संवाददाता
नरेन्द्र प्रसाद जोशी
विनोद भट्टराई (सोविज ट्रेण्ड प्राली)
महाकाली नगरपालिका ४, दार्चुला
सूचना विभाग दर्ता नम्बरः १११९/०७५-०७६
Phone: 9813604319, 9848890417, 9848841810
For Marketing & Info.
© 2019 sudur samachar All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology